Roku အတွက်အကောင်းဆုံး VPN (2020) - လုံခြုံပြီးမပြတ်မတောက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း - Vpn
Roku အတွက်အကောင်းဆုံး VPN (2020) - အလုံခြုံဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောသူ
Roku သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်လွှင့်နိုင်သောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတန်ချိန်များစွာရှိသည်။သင်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်မှအမျိုးမျိုးသော streaming ရွေးစရာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။VPN သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်သူများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အကူအညီဖြင့်နိုင်ငံတကာအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာနိုင်သည်။ Roku ပါသော VPN ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လူတိုင်းသည်ကြည့်ရှုရန်အကြောင်းအရာကုန်သွားသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မူးရူးစောင့်ကြည့်ဖို့အသစ်ပြပွဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်သင်၏ Roku အတွက်အကောင်းဆုံး VPN service များကိုဆွေးနွေးကြသည်။ အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူကကူညီလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် Roku နှင့်အတူ VPN ကိုသုံးပါ?
VPN သည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသအတော်များများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အခြားနိုင်ငံများမှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုလိုကြသည်။ VPN တစ်ခုကသင့်အားဤပြforနာအတွက်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်သူလျှိုများထံမှလုံခြုံရန်လည်းသင့်အားကူညီသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာနှင့်ကွန်ယက်သည် ၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်းသူတို့၏ယိုစိမ့်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ Roku ရှိ torrent platform များမှတဆင့်စီးဆင်းသောသုံးစွဲသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိသည်။ ဒေသများစွာ၌အခမဲ့အင်တာနက်တီဗွီဝန်ဆောင်မှုများသည်မလွယ်ကူပါ။
FireStick အတွက်အကောင်းဆုံး VPN
Netflix အတွက်အကောင်းဆုံး VPN
Roku အတွက်အကောင်းဆုံး VPN စာရင်း -
သင်၏ Roku စက်နှင့်ကိုက်ညီသောရှာဖွေမှုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်အကောင်းဆုံး VPN ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးစရာများကိုမျှဝေသည်။ သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်မည့်အချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
၁။ Nord VPN
NordVPN သည်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းကာကွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ပလက်ဖောင်းသည်ဝါသနာရှင်များအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။သင်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်သင် browsing အတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။ အဆိုပါ software သည်အလွန်တတ်နိုင်သည်နှင့်စက်တိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်။ Roku သည် Nord VPN ဝန်ဆောင်မှုကို၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ထောက်ပံ့သည်။ ရိုးရိုးအဆင့်အနည်းငယ်အတွင်းသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆာဗာပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် streaming အက်ပ်များကိုကြည့်ရှုစဉ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။
Bandwidth သို့မဟုတ် NordVPN တွင်အချက်အလက်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ အသုံးပြုသူများသည်ကမ္ဘာ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝင်ရောက်၍ အကန့်အသတ်မရှိသောအကြောင်းအရာများကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲ၏နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ stream ။ သင့်ရဲ့အပိုကောက်ခံဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
Nord သည်၎င်း၏ရုံးချုပ်ကိုပနားမားတွင်ရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှမည်သူ့ကိုမျှထုတ်ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လုံခြုံရေးဥပဒေများသည်ထိုဒေသရှိလူတိုင်းအတွက် ၁၀၀% လုံခြုံသည်။ ၎င်း app သည်၎င်းတို့၏ platform ပေါ်တွင် AES 256 bit encryption ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးပြပွဲတွေကိုကြည့်ရင်းမြန်နှုန်းမြင့် streaming လုပ်ချင်တယ်။ အကြောင်းအရာကိုကြည့်နေစဉ်မည်သူမျှлагနှင့်ကြားခံခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၂။ Express VPN
Express VPN သည်နှစ်၏အကောင်းဆုံး VPN service ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကရရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ပလက်ဖောင်းသည်နည်းပညာဝါသနာရှင်များအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။သင်သည်သူတို့၏အထူးဝန်ဆောင်မှုကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ အခုသူတို့မှာဖောက်သည်အသစ်တွေအတွက်အထူးသီးသန့် ၄၉% လျှော့စျေးပေးထားတယ်။ အကြောင်းအရာကိုသော့ဖွင့်ခြင်းသည်ဤဆော့ဖ်ဝဲအတွက်ကိတ်မုန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့် streaming device ပေါ်တွင်မဆို၎င်းကို set up ၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သူတို့၏သင်ခန်းစာအတွက်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Express VPN သည်စက်ပစ္စည်းအများစုနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော်တွင်ပျံ့နှံ့နေပြီးနေရာ ၁၆၀ တွင်ဆာဗာများရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်နေရာမှမဆိုလာရောက်ပါ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြု။ ပလက်ဖောင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။
Express VPN သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုအောက်ခြေတွင်ထားသည်။ သူတို့၏ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအမြန်နှုန်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်သောအရာများကိုပေးသည်။သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကို 24/7 ရရှိနိုင်ပါသည်။ အုပ်စုထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုသည်စင်မြင့်ကိုကြိုးစားရန်လိုအပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျမဆိုအန္တရာယ်မရှိဘဲ features တွေထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Expressvpn သည်သုံးစွဲသူများအားရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းနိုင်သည့်အာမခံချက်ပေးထားသည်။ ဒါဟာအများကြီးမကုန်ကျသောအလွန်ကြီးစွာသောဝယ်ယူမှုဖြစ်ပါသည်။
Cyberghost သည်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုသူအခြေပြုအဆင့်မြင့်သော VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယူအက်စ်တွင်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထူးခြားသောဆော့ဝဲဒီဇိုင်းပါသောနိုင်ငံတကာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖတ်ရှုသူများစွာအတွက်အကျိုးအမြတ်များစေသည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှာအနိမ့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတော်များများကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ features တွေဒီပလက်ဖောင်းကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ complimentary ဖြစ်ကြသည်။အသုံးပြုသူများအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ stream နှင့် browse နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Torrents သည်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်စိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်။ ဒေသအများစုတွင် VPN ပလက်ဖောင်းမရှိဘဲ torrent downloads ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံးဝအန္တရာယ်ကင်းသည်။ Roku သည်သင်၏ ISP ကိုအန္တရာယ်ရှိစေသည်။ Cyberghost VPN ကိုအကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို Popcorn Time ကဲ့သို့သောတတိယပါတီ streaming app များအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် IPTV ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ ဤပလက်ဖောင်းများသည်အသုံးပြုသူများကိုမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအားကစားပွဲများကိုစီးဆင်းစေသည်။လူတိုင်းသည်ဤအရာများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏အသုံးပြုရန်အတွက်ခက်ခဲနိုင်သည်။ စီးဆင်းရန်အတွက်စျေးကြီးနိုင်သည့်အားကစားပွဲများစွာရှိသည်။ Cyberghost VPN မှတဆင့်သင်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအန္တရာယ်များသောဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒေသဆိုင်ရာသော့ခလောက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ CyberGhost ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်သင်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ သင်၏အင်တာနက်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်တီဗီရှိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုဤ VPN မှတစ်ဆင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် streaming ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် app နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
CyberGhost VPN ကိုရယူပါ
4. Vypr VPN ကို
Vypr သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော VPN ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဘတ်ဂျက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နေသောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ သင်သည်သူတို့၏ရေရှည်အစီအစဉ်များဖြင့်ငွေအမြောက်အများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အန္တရာယ်မကင်းသောဝယ်ယူမှုအတွက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ရှိသည်။ Roku ထုတ်ကုန်များအတွက်တပ်ဆင်ရန်အချိန်များစွာမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လက်ရှိရရှိနိုင်သည့် Roku ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Vypr ကိုမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုထိထိရောက်ရောက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မည်သူမျှသူတို့၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်ခွင့်မပေးပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်၏ VPN ပလက်ဖောင်းသည်လွယ်ကူပါသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးသင့်အားသတင်းအချက်အလက်များစွာဆောင်ယူသည်။ သင်၏အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာသည်တတိယပါတီရင်းမြစ်များသို့မရောက်ရှိစေရန်၎င်းသည်စာရင်းစစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သူမျှစစ်ဆေး။ သင်၏အင်တာနက်အသွားအလာသည်လုံးဝအန္တရာယ်ကင်းသည်။
VyprVPN တွင်စိတ်ကူးကောင်းသည့်စာဝှက်စနစ်ပါရှိသည်။ သင့်အားအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးပေးရန်ဝါယာကြိုးကိုယ်ရံတော် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုအတွက် AES protocol ကိုအသုံးပြုသည်။ ပလက်ဖောင်းသည်သုံးစွဲသူများအား 256-bit ကာကွယ်မှုပေးသည်။
ထိပ်တန်း streaming ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု
Vypr သည် streaming အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ Roku streaming box သို့မဟုတ် TV အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ Netflix၊ BBC iPlayer, Hulu, Prime Video နှင့်အခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
IPVanish သည်အဆင့်မြင့် VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏စျေးနှုန်းများသည်အခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်မားသည်။ သင်၏အပိုအသုံးစရိတ်အတွက်အရည်အသွေးရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ချရသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော VPN software ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်များအတွက်ရရှိနိုင်အချို့သောစိတ်ကူးကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ်။
ရက် ၃၀ အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အာမခံချက်ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
IPVanish သည်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်အရေးကြီးမှုကြောင့်၎င်း၏အမည်နှင့်အညီနေထိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သငျသညျသဲလွန်စထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကို browse နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းအလွန်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးပုံစံဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်များစွာမှီခိုနိုင်သည်။
အရာများကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ VPN ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏တည်နေရာကိုပစ်မှတ်ထားသည်။သင်၏အကြောင်းအရာနှင့် streaming စွမ်းရည်များကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းကိုသင် IPVanish router setup guide မှတဆင့်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိသုံးစွဲသူများအတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အပလီကေးရှင်းတားမြစ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီသောကြောင့်သင်ပလက်ဖောင်းကိုအားကိုးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုမှတဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုစီးဆင်းနိုင်သည်။
ဒီတော့ဒါတွေက Roku ပလက်ဖောင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရွေးခြယ်မှုတွေပဲ။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်များကိုကောင်းမွန်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုများမှယနေ့စတင်ပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းအခမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့် ၀ က်ဆိုက်များ
ဖိုင် ၁ ဖိုင်အားအတည်မပြုနိုင်ဘဲ pubg ကိုပြန်လည်ရယူရလိမ့်မည်
တစ်ဦးရပ်စဲ roblox အကောင့်ပြန်ရဖို့ဘယ်လို
xbox one တွင်သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိသည်